NTFS, oo waxay u taagan tahay File System New Technology, waa nidaam file a in la horumariyo by Microsoft ee 1993. Waxaa meesha baruurta iyo File System qaab High qaaday. NTFS lahaa horumarka farsamo dhowr ah oo ay ku jirto taageero u metadata, iyo qaab-dhismeedka xogta sare. Halkan waxa ku jira muuqaalada NTFS:
-NTFS Yimid qaab fiican, isku haleynta, iyo si fiican disk meel isticmaalka.
-It Ka mid kordhin dheeraad ah sida nidaamka file journaling iyo liiska ammaanka helitaanka ah.
-It Ka mid ah qaababka cusub sida taageerada Finensej file, reparse dhibcood, kootada isticmaalka disk, link-socod oo loo qaybiyey iyo imayladad System File.
Markii la isbarbar dhigo ntfs iyo baruurtii 16/32 baruurta iyo exFAT
NTFS waa xad cusub marka la barbar dhigo baruurta ama Ex baruurta si kastaba ha ahaatee weli saddex oo dhan waa in la isticmaalo, maxaa yeelay, maanta oo dhan oo iyaga ka mid waxey leeyihiin faa'iidooyin iyo khasaaro. Halkan waxaan ku barbar NTFS, FAT16 / FAT32 iyo exFAT inuu kaa caawiyo inaad fahamto faraqa u dhexeeya oo dhan.
232 kooxahaasi laga jaray 1 cluster
32 GB u OS oo dhan. Qaar ka mid ah 2TB OS
Max gudbiyo on Volume
Ku dhowaad aan xad lahayn
Haa laakiin yar gilay warka kaliya
Haddii mugga uu yahay mid yar, qaab waa yaraadeen iyo tagaa qeybsanaan.
Aad sare on qiyaasta yaryar iyo qeybsanaan ku xigeenka
Dhaqaalaha meel disk
Haa haddii TFAT waxaa firfircoonaan
Khilaafyadaas waxaa ay muujinaysaa sida nooc kasta drive adag uu leeyahay faa'iido iyo khasaaro. Sidaa awgeed, ujeeddo gaar ah drive adag la faa'iido gaar ah loo isticmaalo. Tani waa sababta weli dhammaan foomamka la isticmaalayn.
Sidee inuu ka soo kabsado faylasha nidaamka file NTFS
Haddii aad ka lumay file qalad ah, waxaa laga yaabaa in ay sabab u tahay tirtirka, weerar virus, formatting, howlgal aan habboonayn ama wax kale, ma jirto wado inuu ka soo kabsado aad gudbiso. Software xisbiga saddexaad ka Wondershare loo yaqaan Data Recovery waa aalad awood leh in ay leeyihiin, halka ay jirto xaalad degdeg ah oo file lumin. Software Tani waa awood kabsaday wax talaabooyin dhawr. Halkan waxaa ku qoran waxaa kasoo muuqday:
-It Waa awoodaa inuu ka soo kabsado dhammaan noocyada files oo ay ku jiraan waraaqaha, videos, fariimaha, sawiro, Cajalado, archives iyo qaar badan.
-It Bogsan karaan qalabka sida recycle bin, drive adag, flash drives, kaararka xusuusta, drives saari karo, camera digital / fiidiyo iwm
-In Inta badan xaaladood khasaaro xogta software shaqayn doono ha ahaado tirtirka shil ah, formatting, howlgal aan habboonayn, virus computer, shil, midnimo iyo qaar badan.
-Software Shaqeeyaa soomi iyo soo kaban karto xogta ku daqiiqo iyo xaalad wanaagsan. Interface waa is-maamulkaa, sidaa darteed, xitaa qaansheegta kaloo isticmaali kartaa software this fudayd.
-Currently, Waxa ay taageertaa kombiyuutarada Windows iyo Mac.
Waxaad kala soo bixi kartaa software ka version buuxa ka goobta rasmiga ah iyo labada daaqadaha iyo versions Mac waxaa laga heli karaa. Si kastaba ha ahaatee, aad rabto in aad isku dayi kartaa version lacag la'aan ah oo leh waxyaabo xaddidan. Halkan waxa ku jira saddex tallaabo inuu ka soo kabsado xogta ka NTFS drive adag isticmaalaya Wondershare Data Recovery .
Download software ka goobta rasmiga ah ee wondershare. Waxaa rakib aad Windows ama Mac. Ka hor inta aadan abuurtaan software ah, hubi in aad ku xiran drive ka taas oo aad rabto inuu ka soo kabsado files. Hadda abuurtaan software on your computer, u tag lumay kabashada File, oo guji ku yaal.
On screen Next, waxaad u baahan doontaa inaad doorato drive ka aad rabto in aad soo kabsado. Foomka waxa ku qoran oo dhan drives la xiriira your computer. Waxa kale oo aad dooran kartaa sida aad rabto in aad drive Scan. Waxaad doonaysaa in dhamaystiran scan ama deg deg ah scan. Hadda riix ku drive aad rabto iskaan. Click on Next Start si ay u bilaabaan baaritaan.
Marka, scan la soo gabagabeeyo. Waxaad heli doontaa liiska faylasha badiyay drive iyo xaalad ka mid ah kuwa files. Waxa kale oo aad ku eegaan karo files ka hor intaadan soo si uu u hubiyo xaaladda ay. Hadda uun u hubiso in aad sax faylasha aad rabto in aad soo kabsado. Hadda riix kabsado laga bilaabi karo habka dib u soo kabashada.
Kadib markii geedi socodka, files ah waxaa laga heli karaa goobta default oo ka mid ah soo kabsado. Ha tegin oo la furo iyaga oo wuxuu ku raaxaysan, aad files lumay waxaa la soo kabsaday. Dadka Waxyaabaha waa is ogow of marka la isticmaalayo si NTFS.In in ay sii NTFS xaalad fiican ee ugu macquulsan markii ugu dheer, waxay u baahan tahay qaar ka mid ah tallaabooyinka feejignaan ka kooxdiisa.
Naftaada ka isticmaalaya warbaahinta saari Xaddid. Waa habka ugu caansan ee dhaawac drives NTFS aad. Ka dhig drives USB iska isticmaalaya software ilaaliya ama iska jir ahaan kaxeeyo.
Ka dhig your computer ka taliso. Waa in aad u aragto sida aad ku xidhmaan LAN si loo hubiyo in aadan wax yeesho disk adag.
Mar walba firewalls kor u. Haddii ay suurtagal tahay, soo iibsadaan antivirus awood leh brannmur sii casriyeeyay si aad computer ka nabad hanjabaad joogto ah.
Jidka Great si loo badbaadiyo macluumaadka aad. Xataa waxaad ka dib kartaa xogta aad ku Cloud. Si joogto ah, iskaan drive ay ku adag tahay ama u qaab inaad heer mug leh qaab.
> Resource > Hard Drive > Sidee inuu ka soo kabsado xogta lumay ka NTFS Hard Drive?